हारपछि बार्सिलोनामा प्रश्न, उमेर ढल्केका खेलाडीको भविष्य के होला ? – नेपाली सूर्य
August 16, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on हारपछि बार्सिलोनामा प्रश्न, उमेर ढल्केका खेलाडीको भविष्य के होला ?
३२ साउन, काठमाडौं । च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा बायर्न म्युनिखसंग हारपछि बार्सिलोनाको भविष्यलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको छ ।
३३ वर्षीय मेसीले यस सिजन बार्सिलोनाका लागि ४४ खेल खेल्दै ३१ गोल गरेका छन् । अनलाईनखबर बाट
शल्यक्रियापछि कस्तो छ लिजेण्ड फुटबलर पेलेको स्वास्थ्य अवस्था ?
क्रिकेट एकेडेमी खोल्ने र त्यसलाई देशभर पुर्‍याउने पारस खड्काको योजना
August 4, 2021 Nepali Surya